Zaratostra : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Zaratostra : Fahasamihafan'ny versiona roa
Endrik'io pejy io tamin'ny 8 Oktobra 2020 à 15:38
Endrik'io pejy io tamin'ny 31 Desambra 2018 à 09:27 (hanova)
(Pejy momba ny fivavahana)
Endrik'io pejy io tamin'ny 8 Oktobra 2020 à 15:38 (hanova) (esory)
I [['''Zaratostra]]''' na [[Zaratostra|'''Zoroastra]]''' dia mpanavao ny fivavahana iraniana, dia ny [[mazdeisma]]. Ny fivavahana niforona vokatr'izany fanavaozana izany dia ny [[zoroastrisma]] na zoroastrianisma.
== Ny fampianarany ==
Nnanomboka amin'ny maha mpisorona i Zaratostra tao amin'ny [[mazdeisma]] tao [[Persia]], izay nahitana fombam-pivavahana momba ny sorona, dia ny fanaovana sorona biby. Nahita an'i [[Ahura Mazda]], ilay Andriamanitra fara tampony, izy ka nanomboka nitory teny tamin-kafanam-po.
* Nambarany fa ho avy ny Fanjakan'ny Fahamarinana ka ilaina ny fiarahan'ny olona manatanteraka ny asan'Andriamanitra mba tsy hahazoana fanasaziana feno;
* Nambarany koa fa ny andriamanitra Ahura Mazda dia nakarina ho amin'ny laharan'ny Andriamanitra fara tampony, ka nahatonga ireo andriamanitra hafa ho lasa ambany;
* Mino [[Monoteisma|andriamanitra tokana]] izy (i Ahura Mazda) nefa manaiky ny fisian'ny hery na foto-javatra roa mifanohitra ([[Doalisma (finoana)|doalisma]]), dia ny Fanahy tsara sy ny Fanahy ratsy;
* Nanohitra ny [[mitraisma]] izy ka nanenjika azy mafy ny mpisorona ao amin'io fivavahana io, satria amin'i Zaratostra dia habibiana ny fanaovana sorona biby satria manana fanahy koa ny biby;
* Helohiny ny fisotroana zava-pisotro mahamamo izay misakana ny olona tsy hieritreritra tsara sady fanaon'ny mpanaraka ny mitraisma izay.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/997795"